उनी को हुन?
मन्त्री भए छापामार दस्ता अघी पछी लगाएर कता?
घर भत्काउने उनी कुन मन्त्री?
भमिसुधार। मैले त अशान्ती तथा पुन भत्काउ मन्त्री भन्ने ठानेको।
घर भत्काएर भुमी कसरी सुधार्ने?
भुमी होइन मान्छे सुधार्ने।
मान्छे सुधार्न बन्दुक नै चाहिन्छ त?
चाहिन्छ नि। १० बर्षमा सुधार्दा पनि बहुमत आएन अब अलि सुधारेर बहुमत ल्याने।
१० बर्ष लड्दाखेरीका बन्दुक त पानी ले बगाएन र?
बगाएको हो, कोसीको भेल फेरी उतार्‍यो क्या।
कोशीको भेलले त फाइदै गर्‍यो?
गर्‍यो नि। अरु फाइदा पनि छन।
कोशी त मान्छेले ल्याको बिपत्ती भन्ने होलान नि कमरेडले दिल्लीमा?
रिशानी होला नि यस्तो कुरा गरे त। बरु अरु सन्धी थपेर खुसी पार्नु छ।
सन्धी सम्झौता त खारेज गर्ने होइन र?
पुरानो भयो, पुनरावलोकन गरेर अझ मजबुत बनाउने।
सन्धी मजबुत भएर के फाइदा हुन्छ र?
सरकार मजबुत हुन्छ नि।
सरकार मजबुत पार्न दक्षिणमै दक्षिणा चढाउनु पर्ने?
यती बुझ्न दश बर्ष लाग्यो। चलि आएको परम्परा, दाम त चढाउनु पर्यो नि।
जनताले जिताएको पार्टीलाइ, दक्षिण किन जानु पर्यो?
भोटले मात्र कांहा सरकार बन्छ त, भारतको ओठ पनि चाहिन्छ।
भने पछि बन्दुक खोलाले बगाएर ठिकै गर्यो?
बगाए पनि चाहिने ठाउमै थुपारेको छ।
अर्को चुनाबमा चाहिएन?
के थाहा अर्को चुनाबभन्दा पहिल्यै पो चाहिन्छ कि??
यसपाली दिहारको गित
ए देउसुरे भने
हामि त त्येसै
हाइ कमाण्ड ले पठार
ताल्चा नभाको सन्दुक
ए पिटौं पिटौं
ए भुटौं भुटौं
गज्जब को छ है, कुरो चाँहि ।
चोरको सरदार हो की मन्त्री हो यो?
तपाईको अन्तिम चार लाईन पनि 'गोली' बराबर लाग्यो है मलाई त:
I am new to Dautari but I enjoy reading the blogs & I liked Maobadi ko Rasrang!! Cannot type Neapali,otherwise would have loved to post my feelings too.I feel that the Maoist are not going to change & they will finish this country one day!!
haia sarar ma basne mantrile pani gunda gardi garchan ra?
उहां बिरप्पनको नया रुप !